कोरोना बिरुध यी ५ खानाहरु ! - स्वास्थ्य - कोरोना बिरुध यी ५ खानाहरु !
Home जीवन शैली स्वास्थ्य कोरोना बिरुध यी ५ खानाहरु !
१. दही : हात स्वच्छता सुनिश्चित गर्न, विशेषज्ञहरू र डाक्टरहरूले नियमित रूपमा साबुनले हात धुनु वा मद्य-आधारित रब प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छन्। जबकि हात स्यानटिसरहरूले जीवाणुहरूलाई हटाउँछन्, तिनीहरूले प्रतिरक्षा क्षमता निर्माण गर्न राम्रो ब्याक्टेरिया पनि लिन्छन्।
“दही एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक हो र हाम्रो शरीरमा राम्रो ब्याक्टेरियाको गठनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। याद गर्नुहोस्, यसलाई ताजा बनाउनु पर्छ। यदि तपाईको घाँटी दुख्ने कारण भए पनि दहीले यसलाई बिगार्न सक्छ तर राम्रो प्रतिरक्षाका लागि तपाईलाई प्रोबियोटिक्स चाहिन्छ। तपाइँ पूरकहरूको सहारा लिन सक्नुहुन्छ “, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट लोभनेट बत्रा भन्छन्।
२. बेसार : सुनको मसलाको हल्दी यसको एन्टी-ऑक्सीडन्ट र विरोधी भड़काउने गुणहरूको लागि परिचित छ। कर्कुमिन, हल्दीमा रहेको कम्पाउन्ड एक अत्यन्त शक्तिशाली एजेन्ट हो र घाउ र संक्रमणको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउँछ। यो कारण हो, प्राय: हल्दीको दुध लिन सुझाव दिइन्छ।
‘धेरै व्यक्तिसँग यो (हल्दी) गलत तरीकाले हुन्छ। यदि तपाईंसँग हल्डी (हल्दी) छ भने, यसलाई पानीमा नराख्नुहोस्, बरु यसलाई दुधमा उमाल्नुहोस् र लोकप्रिय हल्दीको दूध पाउनुहोस्। तपाईं यसलाई नरिवल तेल र काली मिर्चको साथ पनि लिन सक्नुहुनेछ ‘, सुश्री बत्रा भन्छिन्।
३. प्राकृतिक एन्टि भाइरस फूडहरू : तुलसी पात, तारा अनीस (एक मसला), लसुन, र अदुवा केही प्राकृतिक एन्टि भाइरस फूड आइटमहरू हुन् जसले मौसमी फ्लूबाट पनि सुरक्षा दिन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन र विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न, सुश्री बत्राले तुलसी पेय सुझाव दिन्छ जुन पानीमा तीनदेखि चार पातहरू उमालेर मात्र बनाउन सकिन्छ।
‘तपाईं स्टार एनीसको तीन देखि चार टुक्रा लिन सक्नुहुन्छ, यसलाई दुईदेखि तीन फोडा दिनुहोस् र यसलाई तातो गर्नुहोस्। तपाईं अदुवा र आंवला को रस पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईसँग लसुन पनि हुन सक्छ; एक लसुनको लंगो लिनुहोस्, यसलाई चलाउनुहोस्, र यसलाई minutes मिनेटका लागि प्रसारण गर्नुहोस् ताकि यसको कम्पाउन्ड एलिसिन भनिन्छ जसमा शक्तिशाली औषधीय गुणहरू हुन्छन् र सक्रिय हुन्छन् ‘सुश्री बत्रा भन्छिन्।
४. भिटामिन : भिटामिनका सबै प्रकारहरूमा, भिटामिन सी र भिटामिन डीले कसैको प्रतिरोध क्षमता बलियो बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्छ। उहीको लागि, एकसँग धेरै सिट्रस फलहरू र तरकारीहरू आवला, निम्बू, सुन्तला र अरूहरू हुनु पर्छ। साथै, अण्डाको भुई र च्याउहरू भिटामिन डी को एक राम्रो स्रोत हो।
सुश्री बत्रा भन्छिन्, ‘कोओभिड १ with लाई संक्रमित व्यक्तिहरूलाई आईभी (इंट्राभेनस थेरापी) को माध्यमबाट भिटामिन सी दिइन्छ – जसले फ्लुइडहरू सिधा नसामा पुर्‍याउँछ’, सुश्री बत्रा भन्छिन्।
५. जिंक : यो अर्को पौष्टिक तत्त्व हो जुन तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली र मेटाबोलिजम प्रकार्यलाई मद्दत गर्दछ। एक व्यक्ति या त जस्ता पूरक लिन सक्छ वा काउज, कद्दूको दाना, छोला, को माध्यम बाट अन्यलाई आफ्नो आहार मा समाहित गर्न सक्छन्।
Previous articleएमालेमा प्रवेश गरेको छैन,कारबाही फिर्ता गरिपाउँ : टोपबहादुर रायमाझी
Next articleअसाम र मिजोरममा सीमानाको विवाध, गोली चल्दा असामका ६ प्रहरीको मृत्यु